हिंसा र प्रतिहिंसाले कसैलाई पनि हित गर्न सक्दैन
ईसं २००६ मा नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोहीपक्ष नेकपा माओवादी विचमा भएको शान्ति सम्झौताले पन्ध्र बर्ष काटिसकेकोछ । तर पनि हिंसाको घटनाहरु यो वा त्यो कारणबाट भैरहेकोछ । मानिसहरुको मृत्यु र अंगभंग भैरहेकोछ । एनसिविएल ओडेसले संचालन गरेको भ्वायलेन्स ईन नेपालको मिडिया अनुगमन अनुसार सन् २०२० जनवरी देखि डिसेम्बरसम्ममा भएका २४१ वटा हिंसाका घटनाहरु मध्ये १३० वटा कुटपिटबाट, ७९ घरेलु हतियारबाट, १५ वटा साना हतियारबाट र ११ वटा विष्फोटनका घटनाहरुबाट भएकाछन् । बिष्फोटनबाट रोल्पाका चार जना केटाकेटीहरुको मृत्यु समेत भएको थियो ।
नेपालमा हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थहरुको प्रयोग, ओसार पसार, भण्डारन, उत्पादनको विरुद्धमा बलियो कानूनछ । कानून अनुसार दोषीलाई सामान्य जरिवानादेखि सर्वस्व सहित आजिवन कैद सम्मको व्यवस्थाछ । तर पनि नेपालमा हिंसाका घटनाहरु घटी रहेकाछन् । सम्वन्धित पक्षहरुले त्यसका के कारणहरु हुन सक्लान् भन्ने खोजी गर्नु र समस्या निराकरणको लागि ध्यान दिनु जरुरीछ ।
बालकृष्ण खाँड रक्षामन्त्री भएको बेला नेपालमा निरन्तर रुपमा भैरहेको विष्फोटनका घटनाहरु माइनको विषयमा कुरा राख्न रक्षा मन्त्रालयको अफिस सिंहदर्वारमा म र मेरा साथी पुगेका थियौं । मन्त्रीको कार्यालयले दिएको समय भन्दा पन्घ्र मिनट अगाडी हामी पुग्यौं । तर दुईघण्टा भन्दा बढी समय मन्त्रीको स्वकिय सचिव कक्षमा कुरे पछि पनि मन्त्रीलाई भेट्ने पालो आएन । पछि मन्त्रीको सुरक्षा परिषदसंग बैठक छ, भन्ने सुने पछि हामीले भेट्ने आशा मारी फक्र्यौं ।
त्यहाँ कुर्दै गर्दा हामीले एउटा अनौठो कथा समेट्न भ्यायौं । त्यहाँ दुईजना मानिसहरु स्वकिय सचिवको कोठा भित्र पसे । उनीहरुले पस्ने वित्तिकै आप्mनो टोपी फुकालेर स्वकिय सचिवको खुट्टानेर राखे र नरमभावले नमस्ते गरे । मलाई ती मानिसहरु नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्र हालको कर्णाली प्रदेशबाट आएका हुन् भन्ने अनुमान लगाउन गाहारो भएन । ‘पाउमा शिर राखेपछि भनेको कुरा सुन्छ वा पाउमा शिर राखेर कबूल गरे पछि कबूल पुरा गर्नु पर्दछ’ भन्ने कर्णालीबासीको परंपरा रहँदै आएकोछ । मन्त्रीको स्वकिय सचिवसंग उनीहरुको, ‘गोली भएको झोला एयरपोर्टमा प्रहरीले फेला पार्दा दिईएको सजाँयबाट मुक्ति पाउँ’ भन्ने अनुरोध थियो । सजायँ पाएको ठिटोले स्वकिय सचिवको खुट्टा ढोग्दै भने, “मलाई बचाउनु होस । मलाई झोलामा गोली कसरी पर्यो भन्ने थाहा भएन । तालिममा गएको थिएँ । गोलीहरु झोलामा कसरी पर्यो कसरी? थाहा नै भएन । म बसबाट जिल्ला गएको भए पक्रिने थिएन । एयरपोर्टबाट जाँदा क्यामेरामा देखेर पत्र्mयो । मेरो केहि कसूर छैन हजूर । मलाई बचाउनु होस ।”
गाउँका साधारण व्यक्ति जस्तो देखिने त्यो केटो नेपाली सेनाको सिपाहिँ रहेछन् । उनले एकोहोरो रुपले तालिममा जाँदा झोला भित्र गोली परेको र बसमा गएको भए प्रहरीले पक्रिने थिएन भनेर बोलि रह्यो । सत्य के हो भन्ने कुरा त अनुसन्धानमा खटिने निकायले नै सुझाउनेछ । तर त्यस घटनाले नेपालमा मानिसहरुको गोली प्रतिको मोह, लुकी छिपी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ल्याउने लैजाने कुराले केहि त संकेत गर्दछ । त्यसमा पनि गोली तालिम गर्ने क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको थियो, जुन क्षेत्र सेनाको व्यवस्थापनमा हुने गर्दछ । यसले गोली किन्ने, बेच्ने, प्रयोग गर्ने र हिंसा गर्ने व्यक्तिहरुको चाहनालाई शान्ति सम्झौता पछि पनि निमिट्यान्न गर्न सकेकोछैन भन्ने संकेत पनि गरेकोछ । गोली, बन्दूक र बारुदहरु नेपालभरमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै त आई जाई गरिरहेकोछ भन्ने विषयमा केहि जानकारी यस घटनाले दिएकोछ ।
तराई क्षेत्रका एक जना शिक्षकसंग मेरो भेट हुँदा उनले आपूm अपहरणमा परेको घटना बारे सुनाएका थिए । तर त्यो घटना पुरानो नभई हालसालैको थियो । अपहरणकारीहरुले उनलाई केहि पर लगे पछि उनलाई हतियारले लैस युवाहरुको समूह भित्र हुले । ती युवाहरुले उनलाई कहिले ‘पड्काई दिउँ ?’ कहिले ‘बन्दूकले हानुँ ?’ भन्दै तर्साउँथे । ती अपहरणकारीहरुको विचमा एक जना परिचित अनुहार पनि देखा पर्यो । उ उनैको विद्यार्थी थियो । उसंगको कुराकानी पछि ‘ल सर तपाईले पनि हाम्रो समूहलाई साथ दिनु पर्यो’ भन्दै उनलाई फर्काउन विद्यार्थीले उसका टोलीलाई आदेश दिए र उनी छुटे ।
शिक्षकले मलाई अर्को एक किस्सा पनि सुनाए । उनकै गाउँमा घर बनाउने, सामान लोड अनलोड गर्ने काम गर्ने एकजना ज्यामी थिए । एकदिन उनले शिक्षकलाई ‘सर तपाईलाई पनि बन्दूक चाहिन्छ होला नि हैन ? म सस्तोमा बेच्छु, चालिस हजार मात्र’ भनेर बन्दुक किन्न बार्गेनिंग गरे । युवाहरुलाई हतियार किन? भन्ने प्रश्नको जवाफ कोहिसंग छैन । तर हतियारको खरिद विक्रिमा युवाहरु लाग्नु मुलुकको लागि राम्रो लक्षण भने होईन । युवाहरुले सजिलै हतियार उपलव्ध गर्ने कुरा झन गम्भिरछ । आखिर कहाँबाट आईरहेकोछ हतियार?
मार्च २०२१ मा सिराहाको लाहान मालपोत कार्यालयमा गरिएको बम बिष्फोटनले नेपाली जनतालाई फेरि झस्काएकोछ । भन्न त घटना घटेको स्थानमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको पर्चा भेटियो भन्छन्, तर सो समूहले त्यस घटनालाई जिम्मा लिएको समाचार आएको छैन । स्थानिय प्रतिनिधिहरुसंग गरिएको कुराकानी अनुसार घटनामा संलग्न भनी अनुसन्धानको लागि एकजनालाई पक्रेकोछ । तर सत्यता बारे सार्वजनिक गरिएकोछैन । कोहि कोहिले लुटपाटमा संलग्न केहि समूहले उक्त विष्फोट गराएको हुन सक्ने अनुमान लगाएकाछन् भने केहिले लागू औषधी प्रयोग गर्ने युवाहरुलाई उपयोग गरी लुटपाटमा संलग्नहरुले विष्फोटन गराएको हुन सक्ने पनि बताएकाछन् । तर जुनसुकै कारणले उक्त विष्फोट गराएको भएतापनि घाईते हुनु परेका सातजना व्यक्तिहरुले अनाहकमा दुख झेल्नु पर्यो । सिराहाको त्यो विष्फोटन पहिलो होईन । गत फेब्रुअरीमा मात्रै सिराहा कै दुई ठाउँमा सुतली बम सेनाले निष्क्रिय पारेको थियो ।
एउटा दैनिक पत्रिकामा आएको ‘केहि बर्षयता सुसुप्त र निष्क्रिय झै देखिएका तराई मधेस केन्द्रित सशस्त्र समूह फेरि सलबलाउन थालेका छन्, भुमिगत समूहका करीब तीनसय जना फरार रहेकाछन्, जसमा १९ जना भारतका नागरिक रहेकाछन्, सरकारसंग संवादमा नआएका भूमिगत समूह हिंसातर्फ उन्मुख भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले निगरानी बढाएकोछ, सशस्त्र प्रहरीले मुलुकको कुनै पनि भूभागमा हुन सक्ने आतंकवादी गतिविधि र पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सातै प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा प्रतिआतंकवाद सेल निर्माण गर्न लागेकोछ, विश्वव्यापी रुपमै बढ्दै गएको आतंकवादको प्रतिछाया नेपालमा पनि पर्नसक्छ त्यसका लागि सुरक्षा अधिकारीहरु हरहालतमा तयार रहनुपर्छ, नेपालको भूभागमा पनि आतंकवादी प्रवेश गर्न सक्छन् नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति र जनशक्ति परिचालनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले छुट्टै सेल निर्माण गर्न लागेको हो’ आदि जस्ता समाचारहरुले र छिटफुट रुपमा भैरहेको विष्फोटनका घटनाहरु, गोली प्रहार, हत्या खाली लुटपाटको कारणले मात्र नभई अरु गम्भिर कारण पनि हुने सक्ने कुराको संकेत गरेकोछ ।
गत बर्ष एनसिबिएलले तत्कालिन माओवादीका पूर्व कमान्डरसंग भेटी कुराकानी गर्ने मौका पाएको थियो । उनको भनाईमा उनको जिल्लामा उनी लगायत विभिन्न साथीहरुको विरुद्ध लगातार रुपमा विष्फोट हमला भैरहेकोछ र खतराबाट बच्दै आएकाछन् । शसस्त्रव्दन्दको बेला हातहतियार र विष्फोटक पदार्थहरुको ओसार पसार बारे कुराकानी गर्दा उनले सुरक्षा निकायबाट समेत हतियारहरु खरिद गर्ने गरेको उल्लेख गरेका थिए । खासगरी तालिम, व्दन्दको समय र भण्डारन गर्दाको कमजोरीको दुरुपयोग गरी त्यस्ता हतियारहरु बाहिरिने गरेको बताएका थिए ।
विभिन्न बेलामा संचार माध्यमबाट आएका काठ्माडौं लगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा हतियार र बिष्फोटक पदार्थहरुको जफत र पक्राउका घटनाहरुले हतियार र विष्फोटक पदार्थहरुको समस्या नेपालका विभिन्न भागमा अद्यावधि छँदैछ भन्ने कुरालाई नै बुझाउँछ ।
उपर्युक्त प्रशंगहरुबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने नेपालमा साना हतियार र विष्फोटक पदार्थको समस्या हुनुमा निम्न कारणहरु रहेकाछन् ।
क) दशबर्षे व्दन्दबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनबाट सन्तुष्ट नभएका व्यक्तिहरुको समूह यथावत रहेको र सो समूट वा गुटले निरन्तर रुपमा बदलाको भावना बोकी काम गरिरहेको
ख) हतियार र बिष्फोटक पदार्थहरुबाट आम्दानीको श्रोत बनाईरहेको व्यक्ति वा समूह यथावत रहेको
ग) हतियार र बिष्फोटक पदार्थहरुको यथोचित व्यवस्था गर्नमा कमि रहेको
घ) हतियार र बिष्फोटक पदार्थ बिरुद्धको कानूनहरु प्रभावकारी रुपले कार्यन्वयन हुन नसकेको र राजनीतिक भनसून र प्रभाव जारी रहेको
ङ) दक्षिणको खुला सीमा र विश्वव्यापीरुपमा भैरहेको आतंकवादको प्रभाव
च) विगत व्दन्दबाट प्रभावित भई हतियार, आतंक, डर, धम्कीबाट मात्र मागपूर्तिको सम्भावना देख्ने व्यक्ति वा समूहको उपस्थिति र आतंकलाई पेशाको रुपमा लिने युवा समूहहरुको उदय
छ) चरम युवा बेरोजगार र आर्थिक आवश्यकता बिचको अन्तर
ज) राजनीतिक अस्थिरता, छिनछिनमा सरकार परिवर्तन भईरहने परिस्थिति
झ) सरकारको राजनीतिक प्रतिवद्धता अनुसार गम्भीर रुपले प्रतिवद्धता पालना गर्नमा कमि
माथिका जे जस्ता चुनौतीहरु भए पनि नेपालमा लामो शान्तिपूर्ण र सशस्त्र व्दन्दपछि नेपाली जनताले पूर्ण राजनीतिक अधिकार सहितको संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्था पाएकोछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले मानिसले शान्तिपूर्ण ढंगले विना रोकतोक बोल्ने, लेख्ने, सभा सम्मेलन गर्ने अधिकार दिएकोछ । यस आधारमा नेपालमा देखा परेको जुन सुकै समस्याहरुलाई पनि शान्तिपूर्ण उपायव्दारा हल गर्न सम्भव छ भन्ने विश्वास नेपालका नागरिकहरुले लिनु आवश्यकछ । शान्तिव्दारा नै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकास सम्भवछ, न कि हतियारको बलबाट । हरेक राजनीतिक पार्टीहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र वार्ताव्दारा समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । हिंसा र प्रतिहिंसाले कसैलाई पनि हित गर्न सक्दैन । यसको लागि सवैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार हुन्छ । सरकारले राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितताको साथसाथै शिक्षा, श्वास्थ्य, रोजगार, आवास, जेष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षाका कुराहरुलाई ग्यारेन्टी गरी मानव सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ ।